I-Golfer Lexi Thompson I-Biography kunye neenkcukacha zeNkcukacha
ULexi Thompson waphumela kwindawo yegalufa yesizwe xa wayeneminyaka eli-12 ubudala; eneminyaka eyi-16 ubudala, wayesele ephumelele kwiLPGA Tour. Ngoku sele eseneminyaka engama-20, uqhubeka njengomnye wabadlali abaphezulu kwigalufa labafazi.
Wazalelwa: ngoFebruwari 10, 1995, eCoral Springs, Fla.
Isiteketiso: Lexi, ifutshane kuAlexis
2013 uSime Darby LPGA Malaysia
2013 Lorena Ochoa Isimemo
2017 i-Kingsmill Championship
Iimpumelelo eziphambili zama-Amateur
4-0-1 irekhodi ngo-2010 iKretisti Cup
Ngama-Amateur ase-South Atlantic yama-2009
2008 US Girls Junior Amateur Championship
2007 Junior PGA Championship
I-Winner, iVare Trophy (i-average score score), 2017
Ilungu, i-United States iqela leSombhe leNdebe, ngo-2013, 2015, ngo-2017
Ilungu le-United States, i-Curtis Cup ye-2010
Omnye wabazalwana bakaLexi Thompson, uNicholas, ungumdlali ogqithiseleyo we-golfer ophumelele kwi-Nationwide Tour kwaye ilungu lePGA Tour.
Ngomnyaka ka-2007, uThomas wabeka irekhodi njengomgca ongcono kunayo yonke yokudlala kwi-US Women's Open. Wayeneminyaka engama-12, iinyanga ezine kunye nomnye ubudala xa wayenza ngokufanelekileyo.
Xa uW Thompson ephumelele i-Navistar LPGA Classic ye-2011 eneminyaka eyi-16 ubudala, waba ngumncinci kunabo bonke abaphumelele kwi-LPGA Tour (irekhodi ephukile).
ULexi Thompson waba neminyaka eyi-12 kuphela ngo-2007, kodwa wayengelula ukuba enze umhlaba wegalufa uqaphele.
I-Florida yangaphambi kwentsha yenza iintloko zelizwe xa ekwazi ukudlala ngo-2007 US Open Women .
Waguquka kuminyaka eyi-15 ubudala. Uhamba kwi-LPGA Tour eneminyaka eyi-16.
U-Thompson wazalelwa eFlorida waya kwintsapho ethanda igorfu. Omnye umzalwana osekhulile wayeyimpumelelo ye-golfer. Omnye umzalwana osekhulile-uNicholas, oneminyaka engama-12 ubudala u-Alexis - ngumlungu wePGA Tour ophumelele kwi-National Tour.
Thompson, tomboyish njengomncinane kunye nobude beminyaka yobudala bakhe, wakhulela kwimeko yegalufa. Kwaye ukukhuphisana kwagxininisa ekuncintiseni nasekugqibeleni ngokupheleleyo ngo-2007. Ngaloo nyaka, uLexi wasinda kwi-qualification ye-USGA ukufumana indawo enkundleni kwi-2007 US Open Women. Wayeneminyaka engama-12 nje kuphela, inyanga ezine kunye nomhla omnye ubudala xa efanelekileyo, eba ngumncinci-oye wachaphazelekayo-ukubetha irekhodi eyayibanjwe nguMorgan Pressel. (Ingxelo kaThompson isuke iphukile.)
Kwakhona ngo-2007, uThomas wawina i-Aldila Junior Classic, umqhudelwano we-American Junior Golf Association, waba ngowona-mncinci-mncinci we-AJGA. Yaye wayinqoba i-Junior PGA Championship, eba ngumncinci omncinci-owake wathola.
Ngonyaka ka-2008, uThomas wadlala kwisibini sakhe se-US Women's Open (elahlekile ukusikwa, njengokuba wenza ngo-2007), kwaye wamphumelela kobukhosi be-USGA kuphela, i-US Girls Junior Amateur. Ungowesibini umncinci omncinci waloo mqhudelwano (kuphela iAree Song yayiselula).
Ngonyaka ka-2009, uThomas wawina i-Amateur yase-South Atlantic yama-Amateur). Wagqiba u-21, ubophelelwe ngumdlali ophantsi, kwi-LPGA enkulu yeCraft Nabisco Championship , emva kokufumana isimemo esikhethekileyo sokudlala. Kwaye waqhekeza okokuqala ngqa kwi-US Women's Open, ekugqibeleni i-34.
Wadlala kwiqela laseMelika kwi-2010 Curtis Cup, iya ku-4-0-1. Emva koko, ngoJuni 16, 2010, wamxelela ukuba wayeguqulela.
Kungekudala kamva, uThompson waqeda umgijimi kwi- Evian Masters ka-2010, ekugqibeleni kwakhe ekugqibeleni.
Ekupheleni kuka-2010, uT Thompson wacela i-LPGA ngamathuba okudlala amade. Nangona i-LPGA yaphika isicelo, uhambo lwaye lwayeka ixesha eliminyaka eli-18 ubudala elifunekayo ukuvumela uThompson ukuba angene kwi- LPGA Q-School ye-2011.
Ngomhla ka-2011, uThomas wawunqoba i-Navistar LPGA Classic, waba nguyena mncinci kunomdla kwiLPGA. (Le ngxelo yaphulwa ngonyaka ozayo nguLydia Ko .) Wabuyisa kwakhona emva kweenyanga ezimbalwa kwi-Ladies European Tour. Ukuphumelela kwakhe okwesibini kweLPGA kwavela kuSim Darby LPGA Malaysia ngo-2013, wesithathu wasilandela kamva ngonyaka.
Kwaye ngo-Ephreli ka-2014, uMnumzana uToy Thompson wathi ukuphumelela kwakhe kokuqala kwi-Kraft Nabisco Championship.
UMnuz Thompson wayengumqhubi oqhubekayo kule minyaka elandelayo, kunye nempumelelo emibili ngo-2015, enye ngo-2016 kunye neye-2017. Ngo-2017, uThomas wabakhokela uhambo ngokulinganisa umyinge (inqanaba lakhe eli-69.114 lalingelo xesha, kwimbali yeLPGA) kwaye iphumelele kwiRace ukuya kwi-CME Globe.
Indlela yokudibanisa "Se Taire" (ukuba yi-Quiet) ngesiFrentshi
I-Basemen ephezulu yesibini yexesha lonke
7 Iindidi zoLwandle lweeNguquli